Renegade Animation သည် Wienerschnitzel အတွက်ကာတွန်းလှုပ်ရှားမှု၌ Retro လုပ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ Wienerschnitzel များအတွက် Animated ကင်ပိန်းအတွက် Retro သွား
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ Wienerschnitzel များအတွက် Animated ကင်ပိန်းအတွက် Retro သွား
DGWB ရဲ့ပါးနဇာတ်ဆောင်, ဂီတ-မောင်းနှင်စက်အပြောက်ပျက်လုံးများအနောက်တိုင်းကမ်းခြေရုပ်ရှင်များ, ဟောလိဝုဒ် ဂီတနှင့်ပိုပြီး!
လင်းဒေးလ် Calif.-ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကွင်းဆက်တစ်ခုအသစ်ကာတွန်းကြော်ငြာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက် '' 60s မှ Wienerschnitzel ပြန်ကြာပါသည်။ Orange County, ကယ်လီဖိုးနီးယားအေဂျင်စီ DGWB အားဖြင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. , အကြော်ငြာ Wienerschnitzel ရဲ့ 1961 ဇစ်မြစ်ကျလာသောမှ retro ကာတွန်းနှင့် jingles ကိုအသုံးပြုပါ။
တဦးတည်းအစက်အပြောက် Big Angus အမည်ရှိပူပြင်းတဲ့ခွေးတစ်ဆယ်ဂါလံဦးထုပ်ဝတ်ထားဘယ်မှာသည်သူ၏ shootin '' သံဖြစ်သင့်၏တစ် ketchup သာသနာထုပ်ပိုးနေတဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းမြို့မှာရောက်ရှိအဖြစ်ပျစ်သီးတီဗီဥရောပ spoofs ။ နောက်ထပ်အစက်အပြောက် Wienerschnitzel ရဲ့ဒေါ်လာသန်းအကြောင်းကိုတစ်ဦးပီပီထုတ်လုပ်မှုအရေအတွက်သရုပ်ဆောင်ထိပ်တန်းဦးထုပ်နှင့်ညစာစားဝတ်စုံအတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်တင်ရေး "ဟုပြောင်းဖူးခွေးအပေါ်ထဲမှာငွေသား" နဲ့တစ်ဦး MGM-စတိုင်ဂီတတစ်ခုပို့-Up ဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကပျော်စရာလုပ်နေတာကိုချစ်နှင့် retro ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြားတက်အလွန်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအက်ရှလေ Postlewaite ကပြောပါတယ်။ "ဟုအဆိုပါကြော်ငြာကို Creating အေဂျင်စီနှင့် jingle အိမ်သူအိမ်သားနှင့်အတူတစ်စူပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ jingles surfer ကျောက်ထဲကတစ်ဦး breezy, ထိုင်-com-အနံ့ပေါ့ပ်သီချင်းမှစတိုင်မြွေနှင့် range သီဆို bi-ကမ်းရိုးတန်းဂီတထုတ်လုပ်သူကရေးသားခဲ့ကြသည်။ ဖောက်ပြန်သောသူငယ်ရဲ့ကာတွန်းအဖွဲ့သည်ဂီတကနေသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံတွေကိုဆွဲငင်။ "ကျနော်တို့ကသီချင်းတွေကို ယူ. သူတို့နှင့်အတူအထဲသို့ပြေး ဝင်. ," ဒါရိုက်တာ Darrell ဗန် Citters ပြန်ပြောပြသည်။ "DGWB ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်အများကြီးကိုပေး၏။ ကျနော်တို့အရောင်နဲ့ဒီဇိုင်းကိုတွန်းတယ်, နှင့်ပျော်စရာပုံပြင်များပြောပြပါ။ "
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ပုဆန်းသစ် Flash ကိုကာတွန်းနည်းစနစ်, စံနမူနာအနုပညာဦးတည်ချက်နှင့်၎င်း၏ထူးခြားချက်ဖြစ်ကြောင်း genial ဟာသသုံးပြီးမဲဆွယ်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "ဒီကမ်ပိန်းအရာအားလုံးကိုတစ်နည်းနည်းရှိပါတယ်" ဟုဗန် Citters ကဆိုသည်။ "ဒီအနောက်တိုင်းသီချင်းကိုအနောက်တောင်နှင့်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်နေဝင်ဆည်းဆာ၏ထင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီတော့ထက်အရာအားလုံးတောက်ပ lit သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး '' အမြင့်မွန်းတည့် '' ကြည့်ဘို့အသွား, ကျွန်တော်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်ကိုယူ။ မြေတပြင်လုံးအရာလှပသောအနောက်တောင်ပိုင်းနေဝင်ချိန်အတွက်ချိုး၏။ "
"ကျနော်တို့နေတဲ့အကြီးအ client ကိုတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအေဂျင်စီနှင့်တစ်ဦးအကြီးအ jingle အိမ်သူအိမ်သားခဲ့," ဗန် Citters ကထပ်ပြောသည်။ "ဒါဟာပါတီတစ်ခုခုယူဆောင်ကာကြော်ငြာစီမံကိန်းအတွက်-လူတိုင်း၌သငျလိုခငျြအရာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ လေပေါ်ဤအကြောင်းအစက်အပြောက်များကဲ့သို့ဘာမျှရှိပါတယ်။ "
ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့တစ်လိပ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါစတူဒီယိုမကြာသေးမီက၏ပထမဦးဆုံးရာသီပြီးစီး အဆိုပါတွမ်နှင့်ဂျယ်ရီပြရန် ကာတွန်းကွန်ယက်အဖြစ် GEICO ၏များအတွက်အမျိုးသားရေးစီးပွားဖြစ်ဘို့ (ထိုဂန္ Hanna-ဘာဇာတ်ကောင်အပေါ်အခြေခံပြီး) ။ ဒါဟာအစအမေဇုံ, Nickelodeon နဲ့ PBS များအတွက်ကာတွန်းလေယာဉ်မှူးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အေဂျင်စီ: DGWB ။ Jon Gothold, အလုပ်အမှုဆောင်ဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာ '' Courtney Betley, တွဲဘက်ကို Creative ဒါရိုက်တာ / Copywriter; မေီ Krause, ထုတ်လုပ်သူ။
animation ရဲ့: ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့။ Darrell ဗန် Citters, ညွှန်ကြားရေးမှူး, အက်ရှလေ Postlewaite, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ; အန်ဒီ Jolliff, ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ; အဲလက်ခ် Megibben နှင့် Darin McGowan, ကွက်ကို; Sierra Lewis က, ဒီဇိုင်း, Sara Anderson တို့, သန့်ရှင်းရေး, ဂျေဆန် Plapp, Keith Holven, ဟန္န Davidovich, ရီးနာ Gazizova နှင့် Sierra Lewis က, ကာတွန်း, အန်ဒီ Jolliff, ပေါင်းစပ် / အယ်ဒီတာ့အာဘော်။
ဂီတ: မြွေသီဆို။ ခရစ် Fulford-Brown က, Brandon O'Connell နှင့် Conor Mead, တေးရေး, Glen Galloway, ထုတ်လုပ်သူ။
ကြော်ငြာ ကာတွန်း ကြော်ငြာ ဖောက်ပြန်သောသူငယ် 2014-09-30
ယခင်: Dalet Dalet AmberFin Transcoding ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပီပီ / AMWA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရယူနိုင်သောဖို့ပထမဦးစွာထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ WFX 2014 မှာကိုးကွယ်မှုအဖွဲ့၏အိမ်အဘို့အ RF Solutions ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Range